Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium Round Spacer esezingeni eliphakeme China Manufacturer
Incazelo:I-Aluminium Standoffs ehlanganisiwe,Thenga ama-Aluminium Standoffs,Ezishibhile eziphezulu ze-Aluminium Highoff
Home > Imikhiqizo > Ama-Standoffs enziwe ngokwezifiso > I-Aluminium Round Standoff > Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium Round Spacer esezingeni eliphakeme
Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium Round Spacer esezingeni eliphakeme
Round aluminium standoff , kulula ukuyifaka.Solid ukwakhiwa komzimba.
Kusetshenziswe njengephini lebhokisi lomshini wokukhangisa wokubonisa izimpahla ezithengiswayo ukukhweza izibonakaliso noma ubuciko odongeni
Idizayini yesilinda eqondile, okungasindi, ukuqina okuqinile, kuvikelekile.
1. Pakati kokuma kuhlanzekile, ngakho-ke kulula kakhulu futhi kuphephile futhi kushesha kakhulu.
2. Uma i-standoff yinde kakhulu, sizodonsa intambo kusuka ezinhlangothini zombili.
I-3.Ingasetshenziswa njengenduku yokuhlanganisa, ukudonsa induku, insika yokusekela.
I-Aluminium iza nemibala ehlukahlukene, njengoba wazi, imibala ye-expid iyindlela yokufisela,
abasebenzi bethu abanolwazi ngendawo bagcina beqinisa uhlelo lokulawula ikhwalithi lokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis umhlinzeki we-OEM okhethekile emikhiqizweni yeCarbon fiber, insizakalo ye-carbon fiber CNC, ezinye izinsimbi ze-drones nezimoto. Ngezidingo ezandayo zebhizinisi lomkhiqizo, sandisa ibhizinisi lethu ekuqunjweni kwe-Aluminium CNC, sazinikela ekuhlinzekeni insizakalo ephelele kubathengi.
Amafektri Amanani Aphansi M3 Insimbi ye-Hexagon Xhumana Nanje
I-M3 Button Head StainlessSteel Screw ngenani eliphansi Xhumana Nanje
Yenza ngokwezifiso Ikhwalithi ephezulu Yensimbi engu-M3 Xhumana Nanje
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zokuthengisa Okushisayo Kwe-Aluminium Lock Nut Xhumana Nanje
I-Aluminium Standoffs ehlanganisiwe Thenga ama-Aluminium Standoffs Ezishibhile eziphezulu ze-Aluminium Highoff I-Aluminium Standoff ehlanganisiwe I-Aluminium Standoff Amanani I-Aluminium Standoffs ye-Glass I-Aluminium Standoffs ye-Drone I-Aluminium Standoffs Yezimpawu